Lammaa Magarsaa: OBN sagalee Obboo Lammaa ugguruun gaazexeessitoota mufachiise
2 years ago 4366 Qoodi
Yeroo dheeraadhaaf miidiyaa irraa fagaatanii kan turan Ministirri Ittisaa Obbo Lammaa Magarsaa guyyaa kaleessaa sirna awwaalcha abbaa qabeenyaa Obboo Kabiir Huseen irratti mul'atanii haasawa gabaabaa taasisanii turan.
Jijjiirama siyaasaa waggoota muraasa darban biyyattii keessatti dhufe adda durummaan hogganuun maqaa gaarii kan horatan Obbo Lammaan, erga yeroo dhiyoo as miidiyaa irratti yoo mul'atan kun kan jalqabaati.
Kanaafis jecha sirna awwaalchaa kanarratti argamuun isaanii miidiyaalee hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'ee ture.
Haasaan daqiiqawwan muraasaaf waa'ee abbaa qabeenyaa Obbo Kabiir Huseen isaan waltajjiirratti dubbatan miidiyaalee hawaasaa irratti baay'inaan qoodamees ture.
Haa ta'u malee miidiyaalee sirna awwaalchaa kana gabaasuuf bakkichatti argaman keessaa tokko kan ta'e OBN haasaa Obbo Lammaan taasisan qilleensarra hin oolchine.
Kunis ganama har'aa gazexeessitoota dhaabbatichaa biratti muffii fi komii uumeera.
¤ Akkamiin dhorkame?
Oduun sirna awwaalchaa sanarratti hojjetame kan haasaa Obboo Lammaa Magarsaa of keessaa qabu guyyaa sa'aatii 6 fi 7'tti akka darbuuf qabamee ture, sababa galgala darba jedhuun keessaa hafuu BBC'n gabaaseera.
Haasaan Obbo Lammaa kuni Oduu Ijoo galgala sa'aatii 12 fi Oduu sa'aatii 1 irratti akka darbuuf qabamee ture.
Haa ta'u malee wayita sa'aatiin oduu gahu daayirektarri dhaabbatichaa, 'haasaan Obbo Lammaa kuni akka hin dabarre olii dhorkameera' sababa jedhuun akka hin dabarre dhorkuu odeeffanne.
¤ Gaazexeessitoonni maal jedhan?
Gochi namoota barbaadan akka qilleensarratti hin mul'anne dhorkuu akkanaa kuni mana hojichaa keessatti amma duras kan baratame ta'uu gaazexeessitoonni dhaabbatichaa BBC'f himaniiru.
Haa ta'u malee nama saba Oromoo biraa olmaa guddaa qabaniifi miidiyichaafillee deeggarsa olaanaa gochaa turan irratti raawwatamuun kan daran isaan aarse ta'uu dubbatu.
"Miidiyaa duraan afaan mootummaa qofa ture, namoota bilisummaa kennaniifii deeggaranii akka dhageettii horatu godhan keessaa tokko Obbo Lammaa Magarsaati" jedha gaazexeessaan dhaabbatichaa tokko.
"Har'a olmaan isaanii suni dagatamee yoo sagaleen isaanii akka uummata bira hin geenye ugguramu garaa nama nyaatas " jedha.
BBC'n dhimma kanarratti yaada akka kennan daayireektara olaanaa dhaabbaticha Obbo Zinaabuu Asraat akkasumas Itti Aanaa isaanii Obbo Bojaa Gabbisaatti irra deddeebiin bilbiluus bilbila akka hin kaasne ibseera.
Obbo Lammaa Magarsaan Deettaa Ministira Dhimma Alaa Faransaay Waliin mari’atan
Dec. 22, 2019, 7:52 p.m.
Ibsa Waajjira Paartii Badhaadhinaa damee Oromiyaarraa kenname
MM Abiy Ahimad; Obbo Lammaa dabalatee namoota ida'amuu qeeqaniif deebii kennan